South Africa on alert as cholera outbreak kills multiple in Zimbabwe. – ANTtention Media Fresh Your SEO optimized title
South Africa on Monday issued a cholera alert following an outbreak in neighbouring Zimbabwe.
Healthcare workers countrywide, especially those in Limpopo Province, which borders Zimbabwe, should be on high alert for suspected cholera cases, the NICD said.
It urged the public, especially those living in close proximity to the border with Zimbabwe, to use safe water and practice good hygiene to reduce the risk of cholera and other diarrhea diseases.
According to the World Health Organisation, as of September 11, almost 2,000 suspected cholera cases, including 24 deaths, were reported in Zimbabwe.
As of September 13, there are no confirmed or suspected cases of cholera in South Africa, the NICD said.
Related Topics:choleraSouth Africa